November 21, 2017 Posted by Jhilko.com
काठमाडौं । प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा सोमबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बिस्तारित बैठकले मंसीर ५ गतेका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु प्रकाश दाहालको शोकसभामा परिणत गर्दै चुनावी अभियानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्रकाश दाहालको अल्पायुमा भएको असामयिक निधनमा सिङ्गो पार्टी शोकाकुल भइरहेको बेला सन्निकट रहेको चुनावलाई असर पर्न नदिन माओवादी केन्द्रले चुनावी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागेको हो । यसै सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष दाहालको चुनावी जिल्ला चितवनमा मंसिर...बाँकी
November 19, 2017 Posted by Jhilko.com
३ मंसिर, काठमाडौं । प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको मृत्यु भएको नर्भिक अस्पताल स्रोतले प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ । केही बेरमा अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको आधिकारिक जानकारी दिने बताइएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नर्भिक अस्पताल पुगेपछि प्रकास दाहालको मृत्यु बारे अस्पतालले औपचारिक घोषणा गर्ने बताइएको छ । लाजिम्पाटस्थित आफ्नो निवासमा सुतेकै ठाउँमा उनको मृत्यु भएको प्रारम्भिक जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । अहिले अस्पतालमा आफन्तहरु जम्मा हुने क्रम बढिरहेको छ । प्रकास दाहाल केह...बाँकी
पश्चिम सेती अगाडि बढाउन कुलमानले गरे चीनिया कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता
३० कात्तिक, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको प्रतिष्ठित थ्री गर्जेज कम्पनीबीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने विषयको द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । आज सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । प्रारम्भिक सम्झौता भएको दश महिनापछि संयुक्त लगानी गर्ने र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा समझदारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । गत माघ ३ गते यसबार...बाँकी
भोलि बालाचतुर्दशी, आज पशुपतिनाथमा पितृको नाममा बत्ती बालिने
३० कात्तिक, काठमाडौँ । पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका शिव मन्दिरमा आज बेलुकी दिवंगत पितृको नाममा बत्ती बालिन्छ । प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन बेलुकी देशभरका शिवालयमा दिवंगत पितृका नाममा महादीप बाली भजनकीर्तन र लोक झाँकी प्रस्तुत गरी रात बिताउने गर्छन् । चतुर्दशीका दिन बिहान शतबीज छरेर बालाचतुर्दशी पर्व मनाउने गरिन्छ । देशका विभिन्न स्थानबाट आउने श्रद्धालु भक्तजनको बिहीबार बिहानैदेखि पशुपतिमा भीड लाग्छ । आफ्नो परिवारभित्रका दिवंगत आत्माको चि...बाँकी
बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदद्वारा खारेज
November 13, 2017 Posted by Jhilko.com
२७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौता खारेजको निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए । संसदीय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम भन्दै सरकारले पूर्व निर्णय खारेज गरेको हो। सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय खारेज गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ट्विट लेखेका छन् ‘अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता...बाँकी
सात वर्ष साउदी बसेर यसरी भई सनिताको मानसिक रोगी
November 12, 2017 Posted by Jhilko.com
२६ कात्तिक, बनियानी–झापा । वैदेशिक रोजगारमा गएर सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने योजनाका साथ दैनिक सयौँ युवा विदेशिने गरेका छन् । तर, सबैको सपना पूरा हुन्छ भन्ने छैन । कोही राम्रै दाम लिएर आउँछन्, त कोही रोगिएर थिलथिलो शरीर लिएर भने कोही बाकसमा । यस्तै, सुन्दर भविष्यको खोजीमा सात वर्षअघि साउदी अबर पुगेकी बिर्तामोड नगरपालिका–८ गरामनीकी सुनिता गामी ९४०० मानसिक रोगी भएर फर्किएकी छन् । सात वर्षअघि घरेलु कामदारका रुपमा भारतीय बाटो हुँदै साउदी पुगेकी सुनिता गत वैशाखमा नेपाल फर्किएकी हुन् । घ...बाँकी
November 11, 2017 Posted by Jhilko.com
२५ कात्तिक, रोल्पा । रोल्पाको माडी गाउँपालिका – १ ओतको जंगलमा माओवादी नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन चढेको गाडीलाई लक्षित गरी आज मध्यान्ह माइन बम विस्फोट गराइएको छ । जिल्लाको सुकिदह गाउँपालिकामा चुनाबी कार्यक्रम सकेर घर्तीगाउँ फर्कने क्रममा पुन चढेको गाडी माडी गाउँपालिका– १ भित्तावाड नजिकै पुग्दा पेदीखोलामा बम विस्फोट भएकोे जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक सुदर्शन पन्थीले जानकारी दिए । भौतिक र मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ । बम कस्ले राखेको...बाँकी
मेयरका उम्मेदार गाजा र वडा अध्यक्ष उम्मेदवार हतियारसहित पक्राउ
November 10, 2017 Posted by Jhilko.com
किरण कर्ण जनकपुर । स्थानीय तहको र्निाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार कटुवा पेस्तोल सहित पक्राउ परेका छन् । असोज २ गते तेश्रो चरणमा भएको प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा सबैला नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका एक जना कटुवा पेस्तोल सहित पक्राउ परेका हुन । पक्राउ पर्नेमा धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नं. ८ का ५७ वर्षिया सकुर मिया र धनुषाकै सबैला नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने २० वर्षिया अनिल पासमान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव उपरिक्षक प...बाँकी
काठमाडौं-१० मा धुलो र धुवाँ हटाउनेलाई जनताले मत दिने !
विष्णु नेपाल २४ कात्तिक, काठमाडौं, ‘कतिन्जेल खाने धुलो र धुवाँ ?’ ‘दलका नेता हो यो सडकमा कति राजनीति गर्छौं ?’ सेतो फ्लेक्समा कालो अक्षरमा लेखिएका यी चोटिला ब्यानर कलंकी–नागढुङ्गा सडकका ठाउँ ठाउँमा झुन्डिरहेका छन् । स्थानीय पीडितका नाममा झुन्ड्याइएका ब्यानर मुनिबाट अहिले दैनिक हजारौँ यातायातका साधन ओहोर दोहोर गर्दछन् । करिब सात किलोमिटर पनि नभएको सो दूरी पार गर्न घण्टौँ खर्चिनुपर्छ । लामो जामको कष्टता व्यहोर्नु नपरेको दैनिकी रहन्न सो सडकमा । राजधानी प...बाँकी